Global Voices teny Malagasy · 15 Mey 2019
Tantara tamin'ny 15 Mey 2019
Saripika: Fivoriana anatiny mialoha ny Vovonana Global Voices 2012
Mediam-bahoaka15 Mey 2019
Nivory manokana mba hifanakalo hevitra momba ny olana sy ny hevitra mifandraika amin'ny Global Voices ny vondrom-piarahamoninay nandritra ny telo andro nialoha ny Vovonana Global Voices 2012 tany Nairobi, Kenya. Ankafizo aloha ireto sarin'ny mpikambana ao amin'ny Global Voices nihaona mivantana ireto!
Syria: Nosakanana ny Blogspot? Inona no atao manaraka?
Pakistana15 Mey 2019
Araka ny tatitra farany avy any Syria, dia toa voalaza fa nakaton'ireo mpamatsy tolotra aterineto Syriana rehetra ny sehatra Blogger an'ny Google, izay mampiantrano ny bilaogy malaza blogspot.com. Nakaton'i Syria imbetsaka ny fidirana ao amin'ny Blogspot.
Afrika Mainty15 Mey 2019
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka 30 mey 2005) Efa nandrasana hatry ny ela. - Scentiments miresaka zavatra izay matetika resahin'ny bilaogera kenyanina maro any am-pielezana – manina an'i Kenya. -Ny mpanao politika Kenyanina nanome aingam-panahy tamin'ny fotoanan'ny ‘ahoana moa raha’. Tsy izany angamba no nokasain'ny mpanolotra ny AGOA (Africa Growth and...
Konferansa Advox : Oiwan Lam miresaka ny sivana aoriam-panjanahan-tany
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Jona 2008) Resadresaka nifanaovana nandritra ny Vovonana Global Voices tamin'ny taona 2008 “Ny Fampahalalam-baovaon'olon-tsotra sy ny Fahalalaham-pitenenana amin'ny aterineto” ny 27 Jona 2008 | Jereo | Avoahy ny anao manokana